ललिता निवास प्रकरणमा सुवेदी दम्पत्ति किन पक्राउ परे ? - ramechhapkhabar.com
ललिता निवास प्रकरणमा सुवेदी दम्पत्ति किन पक्राउ परे ?
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई मध्य पुषको ठण्डी पारेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीले पक्राउ गरेको छ । उनीहरुलाई मङ्गलबार साँझ सोल्टीमोडस्थित निवासबाट सीआइबीको टोलीले पक्राउ गरेको हो । ललिता निवास प्रकरण लामो समययता चर्चामा आएपनि सुवेदी अहिले नै आएर किन पक्राउ परे ? चासोको विषय बनेको छ ।